Cayayaankaani waa kuwa ay Samsung ku hagaajisay Galaxy Fold | Wararka IPhone
Samsung Galaxy Fold wuxuu ahaa hal bog oo mugdi ah oo ka jira shirkadda Kuuriyada Koonfureed, Waana in ka dib markii fiasco-ka Galaxy Note 7 iyo astaamaha qarxa, uusan madaxayga soo galin maadaama ay awood u yeesheen inay mar kale bilaabaan kala duwanaansho qiimo leh oo ficil ahaan u jajaban adoo fiirinaya, waxaan ka hadlaynaa dabcan wixii ugu dambeeyay iyo taleefanka laabma.
Ka dib markii si deg deg ah looga soo ururiyey boosteejooyinka gorfeeyeyaasha sababo la xiriira guuldarrooyin badan oo ay soo bandhigtay terminal-ka taasna ay sababtay inay jabto si aan laga maarmi karin, Samsung ayaa ku dhawaaqday in Galaxy Fold uu markale iman doono iyada oo ay jiraan waxoogaa hagaajin ah oo ka hortagaya jees jees caalami ah, maxaad ku hagaajisay Galaxy Fold?
Terminal-ka, sidaad ogtahay, wuxuu si aan xad lahayn u dib dhigay daahitaankiisa iyo dhibaatooyinkiisa iska caabin ah. Xaqiiqdii, waxaa jira dad yar oo u maleynayay in terminaalka aan dib dambe loo arki doonin, maadaama Samsung aysan siinin taariikho cayiman ama sharraxaad aad u qanacsan oo ku saabsan. Telefoonkan isku laaban ee ku kacaya wax ka badan 2.000 oo euro ayaa macno ahaan "ciyaarta ka baxsan". Si kastaba ha noqotee, waxaan dhowaan helnay war-saxaafadeed kaas oo Samsung ay ku dhawaaqeyso ku soo noqoshada jidadkii hore ee Galaxy Fold inta lagu jiro bisha Sebtembar, mar labaad iyada oo aan maalmo cayiman lahayn, laakiin wax waliba waxay muujinayaan xaqiiqda, toddobaadyo gudahood waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno Samsung Galaxy Fold waddooyinka, laakiin… Muxuu Samsung ku hagaajiyay taleefankan?
1 Filimka difaaca ah, oo si habboon loo qariyey
2 Nusqaamaha suunka, wasakhda iyo iska caabbinta
3 Isku xirka isticmaalaha, dhagax kale oo jidka ku jira
4 Mustaqbalka Telefoonada Fudud
Filimka difaaca ah, oo si habboon loo qariyey
Samsung's Galaxy Fold waxaa ku jiray nooc filim difaac ah oo siinaya iska caabin dheeri ah. DWaa inaan xusuusnaano in si cad, looxyada dabacsan laguma ilaalin karo galaas, Sida taleefannada "caadiga ah", tani waa sababta ay iska caabbintooda kuuskuusashada, xagashada iyo "qaniinyada" ay aad u yar yihiin. Sidaa darteed, iyo iyada oo ujeedadu tahay in la siiyo guddiga adag, Samsung waxay dhigeysaa filim ilaalin ah, oo la mid ah ilaaliyeyaasha silikoon ee aan dhigno iPhone-keena si aan u ilaalino shaashadda.
Filimkan, si kastaba ha ahaatee, ma uusan gaarin cidhifyada xarunta, wuu yara yaraa tanina waxay ka dhigtay muuqaal ahaan "foolxumo", Marka laga soo tago la'aanta wax daliil ah oo arrintan la xiriira, falanqeeyayaashu waxay u maleeyeen inay runtii ahayd shaashad shaashad ah. Falanqeeyayaasha, sida kiiskeyga ee www.actualidadgadget.com, badanaa waxaan caado u leenahay inaan ka saarno "ilaaliyeyaasha" si aan u dareemo oo aan u aragno shaashadda sida ay tahay. Hagaag, falanqeeyayaasha qaar waxay doorteen inay baabi'iyaan filimkaan natiijaduna waxay noqotay mid musiibo ah, guddiga ayaa jebiyey xitaa howlaha ka bixitaanka, waana guuldaro dhab ah.
Hadda filimka polymerka caagga ah ee siinaya adkaanta iyo iska caabinta shaashadda ayaa gaaraya geesaha, markaa ka saarista ma ahan wax dabiici ah ama hawl fudud. Intaa waxaa dheer, Samsung waxay ka digeysaa inay ku dari doonto faahfaahinta sanduuqa u sheegaya dadka isticmaala halista ku jirta ka saarista filimkan difaaca ah, oo dhinaca kale ka ah cunsur muhiim u ah Galaxy Fold sida kuwa kale. Tani waa xallinta ugu horreysa ee dhibaatada waana mid, shaki la'aan, aysan waligeed ka tagin shirarka qaabeynta si qaldan.
Nusqaamaha suunka, wasakhda iyo iska caabbinta
Biraha, oo shaki la'aan noqon kara barta ugu jilicsan ee terminaalka iyadoo la tixgelinayo inay tahay meesha ugu badan ee la soo bandhigi karo ee terminal-ka. Barta waxaan ku arkeynaa gunta gebi ahaanba qaawan, meel u jirta dhowr millimitir, laakiin isticmaalka maalinlaha dhab ahaan muhiim noqon kara. Fiirshan oo ka furaya shaashadda kor iyo hoosba wuxuu u oggolaanayaa walxaha qaarkood inay ku "siiban" karaan Tani, markaad duubto oo aad xirto, waxay sameyn kartaa cadaadis, iyo sidoo kale xirashada qaybaha, natiijada mar labaadna waa: shaashad jaban.
Suurtagal tani waxay ahayd dhibaatadii soo gaadhay cutubkii lagu falanqeeyay Xaqiiqda. Qiyaas inaad aadeyso xeebta oo aad ku dhex isticmaaleyso Galaxy Fold jawi ciiddu ay xor ka tahay. Horay waad u ogtahay natiijada, waxay ku dambayn doontaa inaad gasho godkaas ama inaad rabto ama aadan rabin. Hadda Samsung wax badan ayey yareeysay farqigaas, dhinac kale oo aanan fahmi karin sida ay uga soo baxday qolka nashqadeynta, haddii ay u muuqato inay si ka sii fiican u qaban lahaayeen, mar kale orodku waa lataliyeyaal xun oo shirkadda South Korea ah . Intaa waxaa dheer, fiiqa waxaa lagu xoojiyay daboollo ilaalin ah iyo qaybo kala duwan oo bir ah ayaa lagu daray si loo siiyo shaashadda Galaxy Fold qalafsanaan iyo iska caabin dheeraad ah.
Isku xirka isticmaalaha, dhagax kale oo jidka ku jira
Isku xirnaanta adeegsadaha, sida falanqeeyayaasha yar ee marin u helay inay helaan shahaado, sidoo kale waxay ahayd madax xanuun aad u weyn. Codsiyada lama habeynin, animations-ku waxay ahaayeen kuwo gaabis ah oo qallafsan, si aad u badan oo aysan suurtagal u ahayn in la fahmo waxqabadka dhexdhexaadka ah ee terminal-ka haysta qalabkii ugu dambeeyay. Dabcan, waxaan uga faalooneynaa aragtida dadweynaha, maxaa yeelay kiiskeyga wali gacanta kuma haayo Galaxy Fold, waxaan rajeyneynaa inaan dhaqso u helno, laakiin inta ka horeysa waxaan isku koobi doonaa inaan soo saarno ereyada falanqeeyayaashu sameeyeen mudnaantaas.
Barnaamijyadani uma jawaabin sida ugu dhakhsaha badan ama sidoo kale Samsung oo ballan qaaday. Si kastaba ha noqotee, hadda shirkadda South Korea ee war-saxaafadeedka waxay ka digeysaa in tiro badan oo codsiyo ah, labadaba shirkaddeeda saddexaad iyo saddexaad, loo habeeyay si looga dhigo khibradaha isticmaalaha mid raaxo leh oo dareen leh.
Mustaqbalka Telefoonada Fudud
Khatarta ah inaan ka soo muuqdo shan sano gudahood mawduucyo kala duwan oo Twitter ah sababtoo ah fikradda qaldan ee hadalkayga, waxaan aaminsanahay in taleefannada jilicsan ay yihiin mustaqbalka, midkoodna gaaban ama muddada dhexe. Taleefoonnadan ayaa leh dhibaato daran oo adkeysi iyo iska caabin ah, suuqa dhexdiisa, tan taleefanka gacanta, oo istaagaya heerka wareerka. Dadku iyaga ayey aad iyo aad u isticmaalaan, iyagoo raadinaya fudeyd. Durability wuxuu horeyba u ahaa arin culus taleefannada maanta, iyo Bixinta 2.000 euro ee terminaalka ku dhowaad jebiya kaliya adoo fiirinaya ma noqon doonto ikhtiyaar caan ah hadda, ama weligiis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani waa waxa ay Samsung ku xallisay Galaxy Fold oo la filayo bisha Sebtember
Apple waxay diiwaangelinaysaa laba iPad oo cusub si ay u bilaabaan deyrtaan